Ọwara mmiri nke Segovia | Akụkọ Njem
Ọkà ihe ọmụma bụ María Zambrano na-ekwukarị na "na Segovia ọkụ anaghị enwukwasị site na mbara igwe, mana a na-atụpụta ya n'obodo ahụ n'onwe ya" na ọ bụ eziokwu. Obodo Castilian nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na ọtụtụ ihe ncheta mara mma nke na a naghị ahụkarị amara ya.
The silhouette nke Segovia na-adọrọ mmasị site na ọwa mmiri Roman a ma ama nke malitere na narị afọ mbụ n'oge ọchịchị Emperor Emperor Trajan. Agbanyeghị, obodo a sitere na Celtiberian n'agbanyeghị na akara ụkwụ ndị Rome bụ nke na-ejide ibu kachasị taa ekele maka akara ngosi nke ihe owuwu a.
1 Mmalite nke ọwa mmiri
2 Njirimara nke ọwa mmiri nke Segovia
3 A ka nọ n'ọrụ ya ruo n'oge na-adịbeghị anya
4 Akụkọ banyere ọwa mmiri nke Segovia
Mmalite nke ọwa mmiri
Ọ sitere na njikọ nke okwu Latin abụọ aqua (mmiri) na ducere (iji ụgbọala). N'etiti obodo ahụ, e wuru ọwa mmiri ahụ na XNUMXst narị afọ iji weta mmiri site na Sierra de Guadarrama n'obodo ahụ. Tupu e wuo ya, ndị injinia Rome ga-ebu ụzọ mụọ ala a, enweghị ụdị ya na ohere ụzọ mmiri ahụ ga-aga.
Ebe Plaza de la Artillería dị n’aka nri na Plaza del Azoguejo n’aka ekpe, o yiri ka ọwa mmiri a kewara Segovia ụzọ abụọ. Mana eziokwu bụ na nnukwu ihe owuwu ahụ na-emekọ ihe ọnụ na usoro ndị ọzọ nke obodo ahụ, ebe Katidral, mgbidi na Alcazar kwesịrị ka a kpọtụrụ aha pụrụ iche. Na Plaza Mayor anyị nwere ike ịchọta foduru nke otu n'ime ndị na-egweri mmiri n'oge Rom, nke ejiri iji kpochapụ adịghị ọcha na mmiri.
Njirimara nke ọwa mmiri nke Segovia
Ọrụ ọwa mmiri a bụ ibufe mmiri dị oke ọnụ site na mmiri iyi Fuenfría, nke dị kilomita 17, na Segovia. Maka nke a, arụ ọrụ nnukwu ọrụ a nke ihe owuwu Rome jiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 30 n'ịdị elu na arches 167 nke jiri enweghị ike nke ala ahụ were mita 16.222 iji nye ndị mmadụ.
E kewara ihe owuwu a ụzọ atọ dị iche iche: Mpaghara ndị ọzọ mepere emepe (ebe a na-anakọta mmiri), mpaghara peri-mepere emepe (ngalaba nke ọwa mmiri nke bu mmiri ahụ) yana mpaghara obodo mepere emepe (ebe a na-eduzi ma kesaa mmiri ahụ) Ebe ọ gara).
Ozugbo ọ rutere Segovia, a na-achịkọta mmiri n'olulu mmiri nke natara aha 'El Caserón' na site na usoro nkesa dị egwu ejiri igbe ndị kewara, e wetara mmiri na isi mmalite na olulu nke ụlọ ndị mmadụ.
Kedu ihe ọzọ. Ọwara mmiri Segovia nwere ihe dị ka kilomita 15 nke ọkpọkọ ala, n'agbata mmiri dị na isi nke Sierra de Guadarrama na mpụga obodo ahụ, ebe ọwa mmiri ahụ pụtara n'elu arches maka ihe dịka 800 mita.
Ma obughi nani mmiri si na Sierra de Guadarrama bia kamakwa akuku okwute ndi ejiri mee ya.
Mgbe ha na-atụgharị uche n’ụdị ọmarịcha ọrụ ochie dị otu a, na-echekwa etu ọ ga-esi bụrụ na ọ nọ n’ezi ọnọdụ. Ndị Rom adịghị adụ na-enweghị eriri na ọwa mmiri ahụ nwere ogidi 120 na-akwado ogba 167 nke mejupụtara ntụ ntụ nke ejikọtara na-enweghị ụdị ngwa agha. A na-akwado ha site na ọmụmụ ihe zuru oke nke ikike ịkwanye n'etiti nkume nkume!
Na 1999 e kwupụtara International Artistic Historical Monument of Civil Engineering, nke ASCE (American Society of Civil Engineers) kwupụtara.
A ka nọ n'ọrụ ya ruo n'oge na-adịbeghị anya
Ndị Rom rụrụ ụdị ọrụ nka nke na a na-arụ ọwa mmiri ahụ ruo n'oge na-adịbeghị anya na-enweghị mgbanwe ọ bụla kemgbe ọtụtụ narị afọ.
Naanị n'oge mwakpo ndị Alakụba wakporo Segovia na 1072, ụfọdụ arches iri atọ na isii ka njọ. Onye Fray Juan de Escobedo weghachitere mmebi ahụ na narị afọ nke 36.
Site na mbido enwere niche abụọ na ọwara mmiri ebe enwere ike ịbụ chi ndị ọgọ mmụọ mana ha jiri ihe oyiyi San Sebastián na nke Virgin nọchiri n'oge ndị Ọchịchị Katọlik. N'okpuru niches ahụ enwere akụkọ na mkpụrụ akwụkwọ ọla kọpa nke na-ezo aka na ntọala nke ọwa mmiri, nke naanị akara nke ihe odide ahụ ka dị taa.
Akụkọ banyere ọwa mmiri nke Segovia
Akụkọ a na-ekwu na otu nwata nwanyị rere mkpụrụ obi ya nye ekwensu n'ọnọdụ iji wuo ọwa mmiri ka ọ ghara ịrịgo ma gbadata kwa ụbọchị iji nweta mmiri n'elu ugwu ahụ.
Ekwensu nakweere nkwekọrịta ahụ mana iwere mkpụrụ obi nwata nwanyị ahụ, ọ ga-emecha ya tupu oké ọkpa akwaa n'ụtụtụ echi ya, nke ọ na-enwetaghị, nwa agbọghọ ahụ wee gbanahụ ọdachi ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ọwara mmiri nke Segovia
Ihe ị ga-ahụ na obodo ochie nke Óbidos